ပျိုးခင်းအိုး NP-20 - တရုတ် Qingdao ဘုရင်ကကောင်းနယူးပစ္စည်းများ
Ltd. , Qingdao ဘုရင်ကကောင်းနယူးပစ္စည်းများ Co. , PP, PE နဲ့ poe ၏အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းများနှင့်တိကျမှုအချိုးအစားသုံးမျိုး၏ပျိုးခင်းအိုး / ကွန်တိန်နာ (ပန်းပွင့်အိုးများ) ကိုအသုံးပြုခြင်း၏သုံးမျိုး၏အားသာချက်များကိုအပြည့်အဝဆော့ကစားပေး ကုန်ကြမ်းအလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး, နှင့်ပျိုးခင်း Pot ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်။ ပျိုးခင်းအိုး / ကွန်တိန်နာ (ပန်းပွင့်အိုး) ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကိုပန်းပွင့် gro ရေနုတ်မြောင်းများနှင့်လေဝင်လေထွက် function ကိုအကူအညီတောင်း၏ထူးခြားသော, မျှမျှတတတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ...
Ltd. , Qingdao ဘုရင်ကကောင်းနယူးပစ္စည်းများ Co. , က, ပျိုးခင်းအိုး PP, PE နဲ့ poe ၏အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းများနှင့်တိကျမှုအချိုးအစားသုံးခုအမျိုးမျိုး / ကွန်တိန်နာ (ပန်းပွင့်အိုးများ) ကိုအသုံးပြုခြင်း၏သုံးမျိုး၏အားသာချက်များကိုအပြည့်အဝဆော့ကစားပေး ကုန်ကြမ်းအလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး, နှင့်များ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည် ပျိုးခင်း Pot . ပျိုးခင်း Pot s/Containers (flower pots) structure design is unique, balanced growth of drainage and ventilation function help flowers grows up. The special design edge structure of the gallon pot greatly facilitates the transportation, loading and storage. Widely used in flower, nursery plant, vegetable, cotton, watermelon, herbs.
ပျိုးခင်း Pot အားသာချက်:
Qingdao ဘုရင်ကကောင်းနယူးပစ္စည်းများကုမ္ပဏီလီမိတက်၏, Ltd. ခြံထွက်ပစ္စည်း ဂါလန် Pot ခရမ်းလွန် Anti-အိုမင်းထို့အပြင်ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်, ပြင်ပအသုံးပြုမှုအပါအဝင် s ကို (ပျိုးခင်းအိုး / ကွန်တိန်နာ),3နှစ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်; တစ်ချိန်တည်းကြောင့် extrusion ခံနိုင်ရည်, မလှယျကူပုံပျက်သော, မလွယ်ကူသောပျက်စီး, ပန်းကန်အလင်းစွမ်းအင်ကိုချွေတာ, အဆင်ပြေပြေနဲ့စက်ရုံအစားထိုးကုသမှု, ကုန်ကျစရိတ်ငွေစု, အစိမ်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, 100% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်း, ထိုကဲ့သို့သောသစ်ပင်များအဖြစ်အမြဲစိမ်းအပင်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, ချုံ, ပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းမှာ ထုတ်ကုန်ဥရောပ, အမေရိကန်, ကနေဒါတင်ပို့နေကြသည် (ပျိုးခင်းအိုး / ကွန်တိန်နာ) ကိုဂါလန်အိုးအောင်ကိုအကောင်းဆုံးပျိုးခင်းကွန်တိန်နာ, Qingdao ဘုရင်ကကောင်းနယူးပစ္စည်းများ Co. , Ltd ပြည်ပမှာပြည်တွင်းနှင့်တစ်ဦးကြီးမားသောဥယျာဉ်, ဥယျာဉ်တော်ပျိုးခင်းပျိုးထုတ်လုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည် , လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အရှေ့အလယ်ပိုင်း။
ပျိုးခင်း Pot Feather:
အဆိုပါပျိုးခင်းအိုး / ကွန်တိန်နာ (ပန်းပွင့်အိုး) အပင်ကြီးထွားမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းအပင်ကာကွယ်, ကြီးထွားလာစစ်ဆင်ရေးအတွက်ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အားလုံးထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, လုံခြုံမှုနှင့် Recycle သေချာစေရန်ကိုယျ့ကိုယျကိုသဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြကြောင်းထက်မပို 80% သည်စင်ကြယ်တင်သွင်း & အသစ်ပြန်လည်ပစ္စည်းများထားကြပါတယ်။
•အကြောင်းကို3နှစ်များအတွက် anti-အိုမင်းထို့အပြင်, ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုအသက်, ပြင်ပအသုံးပြုခြင်း။
•ဆန့်ကျင် extrusion မရှိပုံပျက်သော, အဘယ်သူမျှမကျိုး။
ကျနော်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရွယ်အစားနှင့်အတူ NP စီးရီးပျိုးခင်းအိုးထောက်ပံ့ :
အချက် ထိပ်တန်း DIA ။ (မီလီမီတာ) အောက်ခြေ DIA ။ (မီလီမီတာ) (မီလီမီတာ) အမြင့် အလေးချိန် Volume ကို package (PSC)
ယခင်: ပျိုးခင်းအိုး NP-15T
Black ကဂါလန် Pot
Black က PP ဂါလန် Pot
ပန်း Pot ပေးသွင်း
ပန်း Pot ထောက်ပံ့ကုန်
Mc-10t ဂါလန် Pot
Mc-15t ဂါလန် Pot
Mc-2 ဂါလန် Pot
Mc-3 ဂါလန် Pot
Mc-5t ဂါလန် Pot
Mc-7t ဂါလန် Pot
NP-10s ဂါလန် Pot
NP-10t ဂါလန် Pot
NP-15t ဂါလန် Pot
NP-2 ဂါလန် Pot
NP-20 ဂါလန် Pot
NP-3 ဂါလန် Pot
NP-5s ဂါလန် Pot
NP-5t ဂါလန် Pot
NP-7h ဂါလန် Pot
NP-7q ဂါလန် Pot
ပျိုးခင်း Pot ထုတ်လုပ်သူ
ပလတ်စတစ် ပျိုးခင်းပန်း Pot